Wararka - RFID aqoonta aasaasiga ah
Gacan-gacmeedka / Gacanka-gacmeedka RFID
Xarig / Gacanka gacanta ee PVC Rfid
UHF sumadda dharka lagu dhaqdo Silikoon
Qoraa Akhristaha NFC ee aan lala xidhiidhin
1. Waa maxay RFID?
RFID waa soo gaabinta Aqoonsiga Soo noqnoqda Raadiyaha, taas oo ah, aqoonsiga soo noqnoqda raadiyaha. Waxaa inta badan loo yaqaan chip electronic inductive ama kaadhka u dhow, kaarka u dhow, kaarka aan la xidhiidhin, summada elektarooniga ah, koodhka elektarooniga ah, iwm.
Nidaamka RFID oo dhamaystiran waxa uu ka kooban yahay laba qaybood: Akhriste iyo Transponder. Mabda'a hawlgalka waa in Akhristuhu u gudbiyo inta jeer ee gaarka ah ee tamarta hirarka raadiyaha aan dhammaadka lahayn Transponder si uu u wado wareegga Transponder si uu u soo diro lambarka aqoonsiga gudaha. Waqtigaan, Akhristuhu wuxuu helayaa aqoonsiga. Koodhka Transponder-ku waxa uu gaar u yahay in aanu isticmaalin baytariyada, xidhiidhada, iyo kaadhadhka mareegta si aanay wasakhda uga baqayn, furaha sirta ahina waa ka keliya ee dunida ka jira ee aan la koobi karin, ammaankiisuna aad u sarreeyo, cimrigiisuna dheer yahay.
RFID waxay leedahay codsiyo badan oo kala duwan. Codsiyada caadiga ah waxaa ka mid ah jajabyada xayawaanka, qalabka ka hortagga tuugada, xakamaynta gelitaanka, kontoroolka goobta baarkinka, automation line-ka wax soo saarka, iyo maareynta alaabta. Waxaa jira laba nooc oo RFID tags: tags firfircoon iyo tags dadban.
Kuwa soo socda waa qaab dhismeedka gudaha ee summada elektiroonigga ah: jaantus jaantus ah oo ka kooban chip + anteenada iyo nidaamka RFID
2. Waa maxay calaamada elektarooniga ah
Calaamadaha elektarooniga ah waxaa lagu magacaabaa sumadaha soo noqnoqda raadiyaha iyo aqoonsiga inta jeer ee raadiyaha ee RFID. Waa tignoolajiyada aqoonsiga tooska ah ee aan lala xidhiidhin oo adeegsata calaamadaha soo noqnoqda raadiyaha si loo aqoonsado walxaha la beegsanayo oo loo helo xogta la xidhiidha. Shaqada aqoonsiga uma baahna faragelin bini'aadam. Sida nooca wireless-ka ah ee barcodes, tignoolajiyada RFID waxay leedahay biyuhu, antimagnetic, heerkulka sare, iyo nolosha adeegga dheer, fogaanta akhriska dheer, xogta ku taal calaamadda waa la qarin karaa, awoodda xogta kaydinta ayaa weyn, macluumaadka kaydinta si xor ah ayaa loo beddeli karaa iyo faa'iidooyin kale .
3. Waa maxay farsamada RFID?
Aqoonsiga soo noqnoqda raadiyaha RFID waa tignoolajiyada aqoonsiga tooska ah ee aan lala xidhiidhin, kaas oo si toos ah u aqoonsanaya shayga la beegsaday oo uu ku helayo xogta la xidhiidha calaamadaha soo noqnoqda raadiyaha. Shaqada aqoonsigu uma baahna faragelin gacanta ah waxayna ka shaqayn kartaa meelo kala duwan oo adag. Tiknoolajiyada RFID waxay aqoonsan kartaa walxaha dhaqdhaqaaqa xawaaraha sare leh waxayna aqoonsan kartaa calaamado badan isku mar, hawlgalkuna waa mid degdeg ah oo ku habboon.
Alaabooyinka soo noqnoqda raadiyaha fogaan-gaaban kama cabsanayaan bay'adaha adag sida wasakhowga saliidda iyo wasakhowga boodhka. Waxay bedeli karaan barcode-ka meelahaas, tusaale ahaan, si ay ula socdaan walxaha ku yaal khadka isku xirka warshadda. Alaabooyinka soo noqnoqda raadiyaha fog-fog ayaa inta badan loo adeegsadaa taraafikada, masaafada aqoonsiga waxay gaari kartaa tobanaan mitir, sida aruurinta lacagaha tooska ah ama aqoonsiga gaariga.
4. Waa maxay qaybaha aasaasiga ah ee nidaamka RFID?
Nidaamka RFID ee aasaasiga ah wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood:
Tag: Waxay ka kooban tahay qaybaha isku xidhka iyo chips. Calaamad kastaa waxay leedahay kood elektaroonik ah oo gaar ah waxayna ku dheggan tahay shayga si loo aqoonsado shayga la beegsanayo. Akhriste: Waa qalab wax akhriya (oo mararka qaar wax qoraya) ku calaamadiya macluumaadka. Naqshadeeyay in gacan lagu qabto ama lagu hagaajiyo;
Anteenada: U gudbi calaamadaha soo noqnoqda raadiyaha inta u dhaxaysa summada iyo akhristaha.
Waqtiga boostada: Nov-10-2021